Xisbiga Midnimo Qaran oo ololahiisa ka bilaabay Puntland (dhegayso+Sawiro) – Radio Daljir
Janaayo 3, 2018 8:56 b 1
Xibsiga Midnimo Qaran oo ah Xisbi siyaasadeed kamid ah Xisbiyadda dalka kajirra ayaa maanta masuuliyiinteeda waxay shir jaraa’id ku qabteen Garowe ,waxay fariin ugu direen shacabka Somaliyeed.
Waxaa Puntland soo gaaray Guddoomiyaha Xisbiga Midnimo Qaran Prof cabdirsaaq Cabdulaahi Waaberi ,isago socdaal kuso maray degaano Puntland katirsan ,lana kulmayaay Bulshada deganada Puntland oo uu ka dhadhicinayeey qorsha xisbigooda iyo inay kusoo biraan xisbiga Midnimo qaran.
Guddomiyaha Xisbiga Midnimo Qaran ee Puntland Burhaan maxamed oo ugu horeyn ka hadlay shirka jaraa’id ayaa fah faahin kabixiyaay Ujeedka safarka Guddoomiyaha Xisbiga Midnimo qaran oo ah xisbi siyaasadeed Qaran.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Xisbiga Midnimo qaran Cabdirsaaq Waaberi oo isna hadalka qaatay ayaa kawarbixiyaay hadafka Xisbigooda iyo ujeedka uu u yimid Puntland .
Cabdirsaaaq Waaberi aya fariin u diray Madaxda Dowladda federaalka ,kaas oo ku aadan in xooga la saaro sidii dalka uga qabsoomi lahayd doorasho hal qof hal cod ah,isla markaana Cagajiid laga ilaaliyo arrimaha xisbiyadda Baddan.
Maxamed Cabdirisaaq oo u qaabilsan dhalinyaradda Xisbiga Midnimo qaran ayaa ka shekayaay Muhiimada xisbigan uu u leeyahay shacabka Somaliyeed iyo doorka dhalinyaradda.
Hoos kadhegayso Wariye Maxamed Lakiman oo Warbixin kadiyaariyaay
zultan abdulahi ali 2 years ago
Guddoomiyaha Xisbiga Midnimo qaran Cabdirsaaq Waaberi iyo dhamaan masuuliyinta iyo taageerayasha xisbiga wan salamya
waxan rajyn in hormuud u yihin axsaab klo bdn o so socda degaankana doorasho dadku codkooda ciday raban ku so dortan garsiya